Genesis 27 (Myanmar/Burmese: Judson (1835)); Arcana Coelestia (Elliott translation) # 3518; The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine (Whitehead translation) # 26České uživatelské rozhraní
1 ထိုနောက် ဣဇာက်သည်ဣဇာက်သည် အို၍ မျက်စိမျက်စိမှုန်သဖြင့် မမြင်မြင်နိုင်သောသောအခါ၊ သားသားအကြီးဧသောဧသောကို၊ ငါ့သားသားဟု ခေါ်လျှင်၊ အကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟု ထူးလေ၏။
2 အဘကလည်း၊ ယခုငါအိုလှပြီ။ အဘယ်သော အခါ သေရမည်ကို ငါမသိသိ။
3 မသေမှီ ငါ့ဝိညာဉ်သည် သင့်ကို ကောင်းကြီး ပေးမည်အကြောင်း၊ သင်၏လက်နက်တည်းဟူသော လေးလေးနှင့်မြှားတောင့်ကို ဆောင်ယူလျက် တောသို့သွား၍၊ ငါစားစရာဘို့ အမဲကောင်ကို ရအောင်ရှာပြီးလျှင်၊
4 ငါမြိန်ရှက်တတ်သော အမဲဟင်းလျာကို ချက်၍ ငါ့ထံသို့ ယူခဲ့ပါလော့ဟု ပြောဆို၏။
5 ထိုသို့ ဣဇာက်သည်ဣဇာက်သည် သားသားဧသောဧသောအား ပြောဆို သောသောစကားစကားကို၊ ရေဗက္ကရေဗက္ကကြားကြားသည်ဖြစ်၍၊ ဧသောဧသောသည် အမဲသားအမဲသားကို ရအောင်တောသို့ အရှာသွားစဉ်တွင်၊
6 ရေဗက္ကရေဗက္ကသည် သားသားယာကုပ်ယာကုပ်ကို ခေါ်၍၊
7 သင်၏အဘက၊ ငါမသေမှီ ထာဝရဘုရားဘုရား၏ ရှေ့တော်မှာ သင့်ကို ငါကောင်းကြီးပေးကောင်းကြီးပေးမည်အကြောင်း၊ ငါစားစရာဘို့ အမဲသားအမဲသားကို ယူခဲ့၍၊ အမဲဟင်းလျာကို ချက်ပါဟု သင်၏အစ်ကို ဧသောအား ပြောသည်ကို ငါကြား ပြီ။
8 သို့ဖြစ်၍ ငါ့သားသား၊ ငါမှာထားသမျှသော စကကားကကို နားထောင်ပါနားထောင်ပါ လော့။
9 ယခုဆိတ်ဆိတ်စုရှိရာသို့ သွား၍၊ ကောင်းသောကောင်းသော ဆိတ်ဆိတ် သငယ်နှစ်နှစ်ကောင်ကို ငါ့ထံသို့ယူခဲခဲ့ပါလော့။ သင်၏အဘ မြိန်ရှက်တတ်သော အမဲဟင်းလျာကို ငါချက်မည်။
10 သင်၏အဘမသေမှီ သင့်ကို ကောင်းကြီးပေးကောင်းကြီးပေး မည်အကြောင်း၊ ထိုအစာကို အဘစားစေခြင်းငှါ သင် သည် အဘထံသို့ပို့ဆောင်ရမည်ဟု ဆိုလေ၏။
11 ယာကုပ်ယာကုပ်ကလည်း၊ ကျွန်ုပ်အစ်ကိုအစ်ကို ဧသောဧသောကား အမွေးရှိသောသောသူ၊ ကျွန်ုပ်ကားချောမွှတ်သောသောသူ ဖြစ်၏။
12 ကျွန်ုပ်အဘသည် ကျွန်ုပ်ကို စမ်းသပ်ကောင်း စမ်းသပ်လိမ့်မည်။ သို့ဖြစ်လျှင် ကျွန်ုပ်ကိုလှည့်စားသော သူဟူ၍ ထင်သဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည် မင်္ဂလာလာကိုမရဘဲ ကျိန်ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာလာကိုသာ ခံရလိမ့်မည်ဟု အမိကိုဆို လေ၏။
13 အမိရေက္ကေကလည်း၊ ငါ့သားသား၊ သင်ခံရသော ကျိန်ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာသည် ငါ၌သင့်ရောက်ပါစေ။ ငါ့စကား ကို နားထောင်နားထောင်၍ ဆိတ်သငယ်တို့ကိုသာ ယူခဲခဲ့ပါဟု ဆိုသည်အတိုင်း၊
14 သူသည် သွား၍ ဆိတ်သငယ်တို့ကို အမိထံသို့ ယူခဲခဲ့သဖြင့်၊ အမိသည်လည်း အဘမြိန်ရှက်တတ်သော အမဲဟင်းလျာကို ချက်လေ၏။
15 ထိုအခါ ရေဗက္ကရေဗက္ကသည် အိမ်အိမ်တွင် မိမိလက်၌ ရှိသောသော သားသားကြီးဧသော၏ဧသော၏အဝတ်အဝတ်၊ ကောင်းမွန်သောသော အဝတ်အဝတ်ကိုယူ၍၊ သားသားငယ်ယာကုပ်ယာကုပ်ကို ဝတ်စေလျက်၊
16 ဆိတ်သငယ်ဆိတ်သငယ်၏ သားရေသားရေကိုလည်းယူ၍ သူ၏ လက်လက်၌၎င်း၊ လည်ပင်ချောသော ဘက်၌၎င်း ဆင်ယင်ပြီး လျှင်၊
17 မိမိချက်သော အမဲဟင်းနှင့် မုန့်ကိုသားသားယာကုပ်ယာကုပ် လက်လက်၌အပ်ပေးပေး၏။
18 ယာကုပ်လည်း အဘထံသို့ သွား၍၊ အဘဟု ခေါ်လေ၏။ အဘကလည်း၊ ငါရှိ၏ငါ့သားသား။ သင်သည် အဘယ်သူနည်းဟု မေး၏။
19 ယာကုပ်ယာကုပ်ကလည်း၊ အကျွန်ုပ်ကား သားအကြီး ဧသောဧသောဖြစ်ပါ၏။ အဘမှာထထားသည်အတိုင်းပြုပါပြီ။ ထထ၍ထိုင်ထိုင်ပါ။ အဘ၏ဝိညာဉ်သည် အကျွန်ုပ်ကို ကောင်း ကြီးပေးမည်အကြောင်း၊ အကျွန်ုပ်၏အမဲသားအမဲသားကို စား ပါလော့ဟု ဆိုလေ၏။
20 အဘဣဇာက်ကလည်း၊ ငါ့သားသား၊ ဤမျှလောက် လျင်မြန်စွာလျင်မြန်စွာတွေ့ရသောအကြောင်းကား၊ အဘယ်သို့နည်း ဟု သားသားအားမေးလျှင်၊ အဘ၏ ဘုရားသခဘုရားသခင် ထာဝရ ဘုရားဘုရားသည် အကျွန်ုပ်ရှိရာသို့ ဆောင်ခဲ့တော်မူသော ကြောင့်၊ လျင်မြန်စွာလျင်မြန်စွာတွေ့ရပါသည်ဟု ပြန်ဆိုလေ၏။
21 ဣဇာက်ကလည်း၊ ငါ့သားသား၊ သင်သည် ငါ့သားသား ဧသောဧသောမှန်သည် မမှန်သည်ကိုသိလို၍၊ သင့်ကို ငါစမ်း သပ်စေခြင်းငှါ၊ ငါ့ထံပါးသို့ချဉ်းကပ်ပါလော့ဟုဆိုလျှင်၊
22 ယာကုပ်ယာကုပ်သည် အဘထံပါးသို့ချဉ်းကပ်၍၊ အဘ သည် စမ်းသပ်လျက်၊ အသံအသံကား ယာကုပ်၏ယာကုပ်၏အသံအသံ၊ လက်လက်တို့ကား ဧသော၏ဧသော၏လက်လက်ဖြစ်ပေသည်ဟု ဆိုလေ၏။
23 ထိုသို့သူ၏ လက်လက်တို့သည် ဧသော၏ဧသော၏လက်လက်ကဲ့သို့ အမွေးပါသောသောကြောင့်၊ ယာကုပ်ဖြစ်မှန်းကို အဘမရိပ်မိ သဖြင့်၊ ကောင်းကြီးပေးကောင်းကြီးပေးလေ၏။
24 သို့ရာတွင် တဖန်ကား၊ သင်သည် ငါ့သားသားဧသောဧသော စင်စစ်အမှန်ပင် ဖြစ်သလောဟု မေးပြန်လျင်၊ မှန်ပါ သည်ဟု ဆို၏။
25 အဘကလည်း၊ ငါ့ထံပါးသို့ သွင်းခဲ့ပါ။ ငါ့ဝိညာဉ်သည် သင့်ကို ကောင်းကြီးပေးကောင်းကြီးပေးမည်အကြောင်း၊ ငါ့သားသား၏ အမဲသားအမဲသားကို ငါစားအံ့ဟုဆိုလျှင်၊ ယာကုပ်သည် အဘထံပါးသို့ သွင်း၍၊ အဘစားလေ၏။ စပျစ်ရည်ကို လည်း ပေး၍ အဘသောက်လေ၏။
26 ထိုနောက် အဘက၊ ငါ့သားသားချဉ်းကပ်၍ ငါ့ကို နမ်းနမ်းပါလော့ဟု ဆိုလျှင်၊ ယာကုပ်သည် ချဉ်းကပ်၍ အဘ ကို နမ်းနမ်းလေ၏။
27 အဘဣဇာက်ကလည်း၊ သူ့အဝတ်အဝတ်၏ အနံ့အနံ့ကို ခံ၍ကြည့်ပါ။ ငါ့သားသား၏အနံ့အနံ့သည်၊ ထာဝရဘုရားဘုရား ကောင်းကြီးပေးကောင်းကြီးပေးတော်မူသော လယ်၏အမွှေးမွှေးအကြိုင်နှင့် တူ၏။
28 ထိုကြောင့် ဘုရားသခဘုရားသခင်ပင် မိုယ်းကောင်းကင်ကောင်းကင် နှင့်ကို၎င်း၊ မြေမြေကြီး၏ဆီဥကို၎င်း၊ များစွာသော ဆန်စပါးစပါး၊ စပျစ်ရည်ကို၎င်း၊ သင့်အား ပေးပေးတော်မူစေသတည်း။
29 သူတပါးတို့သည် သင်၌ကျွန်ခံ၍၊ အပြည်ပြည် တို့သည် သင့်ရှေ့မှာ ဦးညွှတ်ကြရစေသတည်း။ သင်သည် သင်၏ညီအစ်ကိုတို့ညီအစ်ကိုတို့၌ အရှင်ဖြစ်၍၊ သင့်အမိသားသားတို့သည် သင့်ရှေ့မှာ ဦးညွှတ်ရကြစေသတည်း။ သင့်ကို ကျိန်ဆဲ သောသူအပေါင်းတို့သည် ကျိတ်ဆဲခြင်းကို ခံရကြစေ သတည်း။ သင့်ကို ကောင်းကြီးပေးကောင်းကြီးပေးသောသူအပေါင်းတို့ သည် ကောင်းကြီးကို ခံရကြစေသတည်းဟု ကောင်းကြီး ပေးလေ၏။
30 ယာကုပ်ယာကုပ်သည်၊ အဘဣဇာက်ပေးသောသော ကောင်း ကြီးမင်္ဂလာမင်္ဂလာကို ခံ၍၊ အဘထံမှ ထွက်သွားသောသော ခဏခြင်း တွင်၊ အစ်ကိုအစ်ကိုဧသောဧသောသည် မုဆိုးပြုရာမှ ရောက်လာ၏လာ၏။
31 သူသည်လည်း အမဲဟင်းလျာကို ချက်၍ အဘ ထံသို့ ဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်၊ အကျွန်ုပ်အဘ၏ဝိညာဉ်သည်၊ အကျွန်ုပ်ကိုကောင်းကြီးပေးကောင်းကြီးပေးမည်အကြောင်း၊ သားသား၏ အမဲသားအမဲသားကို ထ၍စားပါလော့ဟုဆိုလေ၏။
32 အဘဣဇာက်ကလည်း၊ သင်သည် အဘယ်သူ နည်းဟု မေးလျှင်၊ အကျွန်ုပ်ကား သားသားအကြီး ဧသောဧသော ဖြစ်ပါ၏ဟု ဆိုလေသောသော်၊ အဘဣဇာက်သည်ဣဇာက်သည် အလွန် တုန်လှုပ်၍ အဘယ်သူနည်း၊
33 အမဲသားအမဲသားကိုရ၍၊ ငါ့ထံသို့ ဆောင်ခဲ့ပြီးသော သူသည် အဘယ်မှာ ရှိသနည်း။ သင်မရောက်မှီ ငါသည် အကုန်အစင်စားပြီး၍၊ သူ့ကို ကောင်းကြီးပေးကောင်းကြီးပေးမိပြီ။ သူ သည် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို ဧကန်အမှန်ခံရလိမ့်မည်ဟု ဆိုလေ၏။
34 အဘဆိုသောသော စကားကိုဧသောဧသောကြားကြားလျှင်၊ အလွန်ပြင်းသောသောအသံနှင့် သည်းထန်စွာ ငိုကြွေးလျက်၊ အိုအဘ၊ အကျွန်ုပ်ကိုလည်း ကောင်းကြီးပေးကောင်းကြီးပေးပါလော့၊ ပေးပါလော့ဟုဆိုလေသောသော်၊
35 အဘက၊ သင့်ညီသည် လိမ္မာစွာလာလာ၍၊ သင်၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလာကို ယူသွားပြီဟု ဆိုလေ၏။
36 ဧသောကလည်း၊ သူ့ကို ယာကုပ်ယာကုပ်ဟူသော အမည်ဖြင့် လျောက်ပတ်စွာ မှည့်ပါပြီ မဟုတ်လော။ အကျွန်ုပ်ကို နှစ်ကြိမ်လှည့်စား၍ နိုင်ပါပြီ။ သားဦးအရိပ် အရာကို အရင်ယူသွားပါပြီ။ ယခုလည်း တဖန် အကျွန်ုပ် ၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို ယူသွားပါပြီဟူ၍၎င်း၊ အကျွန်ုပ် အဘို့ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတပါးကိုမျှ မခြွင်းပါသလော ဟူ၍၎င်း ဆိုလေ၏။
37 ဣဇာက်ကလည်း၊ သူ့ကို သင်၏အရှင်ဖြစ် စေပြီ။ ညီအစ်ကိုအစ်ကိုအပေါင်းတို့ကို သူ၌ကျွန်ကျွန်ခံစေပြီ။ ဆန်စပါးစပါး၊ စပျစ်ရည်နှင့်သူ့ကို ထောက်မပြီး။ သို့ဖြစ်၍ ငါ့သားသား၊ သင်၌ အဘယ်သို့ပြုနိုင်တော့အံ့နည်းဟု၊ ဧသောဧသော အား ပြန်ပြောပြန်ပြောလျှင်၊
38 ဧသောဧသောက၊ အိုအဘ၊ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကောင်းကြီးမင်္ဂလာ တစုံတခုမျှ မရှိပါသလော၊ အိုအဘ၊ အကျွန်ုပ်ကိုလည်း ကောင်းကြီးပေးကောင်းကြီးပေးပါလော့၊ ပေးပါလောဟု အဘအား ပြောဆိုလျက်၊ တဖန်အသံအသံကိုလွှင့်၍ ငိုကြွေးလေ၏။
39 အဘဣဇာက်ကလည်း၊ ကြည့်ရှုပါ။ သင်၏ နေရာနေရာသည် မြေမြေကြီး၏ဆီဥနှင့်၎င်း၊ အထက်မိုယ်း ကောင်းကင်ကောင်းကင်၏နှင်းနှင်းနှင့်၎င်း ပြည်ပြည့်စုံလိမ့်မည်။
40 ထားဖြင့် အသက်ကိုမွေးရလိမ့်မည်။ ညီ၌ ကျွန် ခံရလိမ့်မည်။ နောက်တဖန် အစိုးရသောအခါ၊ သူတင် သောထမ်းဘိုးကို သင်၏လည်ပင်းလည်ပင်းမှ ချိုးပယ်လိမ့်မည်ဟု ပြန်၍ဆိုလေ၏။
41 အဘသည် ယာကုပ်ယာကုပ်အား ပေးသောသော ကောင်းကြီး မင်္ဂလာမင်္ဂလာကြောင့်၊ ဧသောဧသောသည် ယာကုပ်ယာကုပ်ကို အငြိုးထား၍၊ ငါ့အဘကြောင့် ညည်းတွားရသောသော နေ့နေ့ရက်ကာလ အချိန် နီးနီးပြီ။ ထိုအခါ ငါ့ညီယာကုပ်ယာကုပ်ကို ငါသတ်သတ်မည်ဟု၊ အကြံနှင့် ပြောလေ၏။
42 ထိုသို့သားသားကြီး ဧသောဧသောပြောသောသောစကားကို အမိ အရဗက္ကကြားလျှင်၊ သားသားငယ်ယာကုပ်ယာကုပ်ကိုခေါ်ကိုခေါ်၍၊ သင်၏ အစ်ကိုအစ်ကိုဧသောဧသောသည် သင့်ကိုသတ်သတ်သဖြင့်၊ သင့်အမှု၌ စိတ်ပြေလိမ့်မည်။
43 ထထိုကြောင့်၊ ငါ့သားသား၊ ငါ့စကားကို နားထောင်ပါနားထောင်ပါ။ ငါ့မောင်လာဗန်လာဗန် နေရာခါရန်ခါရန်မြို့သို့ ထထ၍ ပြေးသွား ပါလော့။
44 သင်၏အစ်ကိုအစ်ကိုစိတ်ပြေသည်တိုင်အောင်၊ သူ့ထံမှာ ခဏရှောင်၍ နေနေပါလော့။
45 သင်၏အစ်ကိုအစ်ကို စိတ်ပြေ၍၊ သင်သည် သူ၌ ပြုသောအမှုကို သူမေ့လျော့မေ့လျော့သောအခါ၊ ငါမှာလိုက်၍၊ ထိုအရပ်မှသင့်ကို ဆောင်ခဲ့စေမည်။ ငါ့သားနှစ်နှစ်ယောက် လုံးကို တနေ့နေ့ခြင်းတွင် အဘယ်ကြောင့် ငါရှုံးရမည်နည်း ဟု ဆိုလေ၏။
46 တဖန်ရေဗက္ကရေဗက္ကသည် ဣဇာက်ထံသို့သွား၍၊ ကျွန်မသည် ဟေသအမျိုးသမီးတို့သမီးတို့ကြောင့်၊ ကိုယ်အသက် ကို ငြီးငွေ့ငြီးငွေ့လှ၏။ ဤပြည်ပြည်သူသမီးသမီးကဲ့သို့သောသူ၊ ဟေသ အမျိုးသမီးသမီးနှင့် ယာကုပ်ယာကုပ်အိမ်ထောင်ဘက်ပြုလျှင်၊ ကျွန်မ အသက်ရှင်၍ အဘယ်ကျေးဇူးရှိပါလိမ့်မည်နည်းဟု ပြောဆိုလေ၏။
Arcana Coelestia # 3518
3518. 'Go now to the flock' means to homeborn natural good that has not been joined to the Divine Rational. This is clear from the meaning of 'the flock' as good, dealt with in 343, 415, 1565, here natural good since the words are addressed to Jacob. Indeed homeborn good is meant since it was homebred, whereas the field from which Esau, who means the good of the natural, 3500, 3508, was to obtain his venison, means good that was not homeborn. In other places in the Word 'the flock' is used to refer to the good of the rational; but in such cases 'the herd' is used to refer to the good of the natural, see 2566. homeborn natural good is the good whichaperson possesses from his parents or is the good that he is born with, which is quite distinct and separate from the good of the natural which flows in from the Lord. What natural good is, and its essential nature, see 3470, 3471. To distinguish one from the other therefore, the first good is called the good of the natural, but the second natural good. What is more, everyone receives homeborn good both from father and from mother; and these are distinct from each other. Good received from the father is interior, that from the mother exterior. In the Lord's case these two forms of good were quite distinct and separate, for the Good which He had from the Father was Divine, whereas that which He had from the mother was polluted with hereditary evil. That Good within the Natural which the Lord had from the Father was His very own since it was His life itself; and this Good is represented by 'Esau'. But the natural good which the Lord possessed from the mother, being polluted with hereditary evil, was by its very nature evil; and it is this good that is meant by the description 'homeborn good'. Yet in spite of being thus polluted, homeborn good was nevertheless of service in the reformation of the natural. But once it had rendered its service it was cast away.
(Odkazy: Arcana Coelestia 415 [1,2], 3470-3471)
 With everyone who is being regenerated something similar takes place. The good whichaperson receives from the Lord asanew Father is interior, but the good he possesses from parents is exterior. The good which he receives from the Lord is called spiritual good, whereas that which he possesses from parents is called natural good. The latter good - that which he possesses from parents - is of service first of all in the reformation of him, for it is through that good, serving as joy and delight, that facts, and after that cognitions of truth, are brought in. But once it has served as the means to effect that purpose it is separated, and spiritual good comes to the fore and manifests itself. This becomes clear from much experience, merely for example from the fact that whenachild first starts to learn he is moved byadesire for knowing, not initially on account of any end in view that is seen by himself but because of some innate joy and delight and because of other incentives. Later on, as he grows up, he is moved byadesire for knowing on account of some end he has in view - excelling others, that is, his rivals. Later still he is so moved on account of some worldly end. But when about to be regenerated his desire for knowing stems from the delight and pleasantness of truth, and when undergoing regeneration, which takes place in adult years, fromalove of truth, and later on fromalove of good. The ends in view which had existed previously, and their delights, are now separated little by little, to be replaced by interior good which comes from the Lord and manifests itself in his affection. From this it is evident that previous delights, which seemed in outward appearance to be forms of good, have served as means. Consecutive series of means such as these occur unceasingly.
 Such series may be compared toatree, which at the initial stage or the start of spring decks its branches with leaves, and after that as that stage or spring advances it adorns them with blossom. Then, around summertime, it produces the elementary signs of its fruit, which go on to develop into the fruit itself; and at length within the fruit it produces seeds, in which are contained new trees like itself - potentiallyawhole garden, which becomesareality if those seeds are planted. Such are the comparisons existing in the natural world. They are also representatives, for the whole natural order isatheatre representative of the Lord's kingdom in heaven, and therefore of the Lord's kingdom on earth, which is the Church, and consequently of the Lord's kingdom with every regenerate person. From all this it is evident how natural or homeborn good, despite beingamerely external and indeed worldly delight, may be of service as the means for producing the good of the natural which may join itself to the good of the rational and so become regenerate or spiritual good, that is, good which comes from the Lord. These are the things which are represented and meant in this chapter by Esau and Jacob.
(Odkazy: Genesis 27:9)
Arcana Coelestia 3520, 3536, 3539, 3540, 3963, 3992, 4178, 4317, 4988, 5354, 6272, 8002, 8315, 9190, 9325
The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 26, 82, 121, 170, 183, 186, 279
The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine # 26
26. Of the various kinds of goods and truths.
There is an infinite variety, and one thing is never exactly the same as another (n. 7236, 9002). There is also an infinite variety in the heavens (n. 684, 690, 3744, 5598, 7236). Varieties in the heavens are varieties of good, and thence is the distinction of all therein (n. 3519, 3744, 3804, 3986, 4005, 4067, 41 4149, 4263, 7236, 7833, 7836, 9002). These varieties are from truths, which are manifold, by which everyone has good (n. 3470, 3519, 3804, 4149, 6917, 7236). Thence all the angelic societies in the heavens, and every angel inasociety are distinguished from each other (n. 690, 3241, 3519, 3804, 3986, 4067, 4149, 4263, 7236, 7833, 7836). But they all act in unity by love from the Lord, and thereby regard one end (n. 457, 3986).
In general, goods and truths are distinguished according to degrees, into natural, spiritual, and celestial (n. 2069, 3240). In general, there are three degrees of good, and consequently of truth, according to the three heavens (n. 4154, 9873, 10270). The goods and thence the truths in the internal man, are ofathreefold kind, and so also in the external (n. 4154). There is natural good, civil good, and moral good (n. 3768). Natural good, into which some are born, is not good in the other life, unless made spiritual good (n. 2463, 2464, 2468, 3408,3469, 3470, 3508, 3518, 7761). Of natural spiritual good; and of that which is not spiritual (n. 4988, 4992, 5032). There is intellectual truth, and scientific truth (n. 1904, 1911, 2503).
Apocalypse Explained 48, 100, 118, 136, 384, 430